Shiinaha Lineer Heat Detector NMS2001 Cable warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Anbesec
Nooca Analog Nooca Khadka Tooska ah ee Lagu Ogaado
Qaabeynta jaakad banaanka ah: PVC
PVC caabbinta heerkulka sare
Heerka caadiga ah: 200m
Dhexdhexaadinta bannaanka ka baxsan: 3.5mm
La dheereyn karo: 100N
Qalabka hagaha: Copper
Astaamaha heerkulka hooseeya: -40 ℃
Heerkulka ugu dambeeya: 190 ℃
Range Heerkulka: 70 ℃ ~ 140 ℃
Danab resistanc: Cadaadiska danab ee u dhexeeya kaari xudunta u ah iyo
jaakada banaanka waa 10KV
MicroSenseWire Analog Linear Heat Detector --NMS2001, wuxuu kakooban yahay afar diirkja oo leh waxqabad sare iyo laqabsasho wanaagsan, waxaa si balaaran loogu isticmaalaa warshadaha, ganacsiga, iyo goobaha halista ah ee kuleylka badan.
Qaab dhismeedka iyo sida ay u shaqeyso
NMS2001 - Xarigga LHD wuxuu ka kooban yahay afar diirk (casaan iyo caddaan) isku leexinaya, jaakadda korena waxaa laga sameeyay maaddada kuleylka iska caabinta — PVC, xoojinta adkeysiga iyo isku halaynta Maaddada jaakada dibedda waa la beddeli karaa si loo buuxiyo shuruudaha deegaanno kala duwan, walxaha iska caabinta kiimikada iyo walxaha ka hortagga UV.
Qaab dhismeedka ayaa lagu muujiyay hoos:
Khadka NMS2001 - LHD wuxuu leeyahay waxqabad sare oo dib udhaca dabka, wuxuu kakooban yahay afar udub dhexaad ah oo laga sameeyay maaddada lakabka dahaarka gaarka ah - NTC (isugeyn heerkulka xun). Qaybta terminalku waxay tilmaami kartaa isbeddelka heerkulka nidaamka iyada oo la kormeerayo isbeddelka qiimaha iska caabinta.
Inta lagu jiro isku xidhka siligga iyo rakibaadda, laba fiilooyin casaan ah oo is barbar socda iyo laba fiilooyin oo cad oo is barbar socda ayaa ku xidhan koontaroolka unugga iyo qaybta terminalka, iyaga oo samaynaya wareeg wareeg ah.
Nidaamku wuxuu ogaadaa isbeddelka caabbinta Khadka Tooska ah ee Heer Ogaanshaha Keenista isbeddelka heerkulka wareegga - yacni marka heerkulku kaco, iska caabbintu hoos ayey u dhacdaa. Isbeddelkan waxaa lagula soconayaa Qeybta Xakamaynta qalabka toosan ee Xarigga Khadka Tooska ah. Markay gaadho qiimaha marinka alaarmiga hore, soo saarista calaamadda qaylo-dhaanta. Astaantani waxay u oggolaaneysaa nidaamka inuu awood u leeyahay inuu ogaado dabka barta ama safka wareegga oo dhan, taas oo ah in nidaamku ogaan karo isbeddelka heerkulka ee barta cayiman iyo sidoo kale aag gaar ah. Ka dib cabsi, waxay si otomaatig ah ugu soo celin kartaa xaaladdii shaqada.
Dhererka guud ee badeecada dhammaatay waa 500m halkii giraangir. Dhererka dheer laguma talinayo, sababtoo ah muuqaalka calaamadaha analogga. Heerkulka dhawaaqa digniinta wuxuu la xiriiraa dhererka xarigga LHD, sidaa darteed waxaa lagu taliyay in lagu sameeyo tijaabada alaarmiga oo leh 2m LHD cable. Haddii heerkulka alaarmiga la dejiyo 105 ℃, ku tijaabi fiilada 5m LHD, heerkulka alaarmiga wuu hooseeyaa, liddi ahaana, heerkulka alaarmiga ayaa ka sarreeya.
♦ La qabsiga sare: waxaa lagu dabakhi karaa aagag cidhiidhi ah, jawi qallafsan oo khatar badan;
♦ Iswaafajin weyn: NMS2001-I Linear Detector Control Unit wuxuu leeyahay soosaar gudbinta, kaas oo ku xirnaan kara qaybaha kala duwan ee xakameynta alaarmiga dabka;
♦ Iska caabinta kiimikada iyo iska caabinta abrasion: soosaar oo samee jaakad leh awood sare, oo dabooli karta baahiyo kaladuwan;
♦ Dib-u-dejin: fiilada LHD si otomaatig ah ayey dib ugu noqon kartaa cabsi kadib (xaalada heerkulka walaaca leh ee dabka waxyeello uma geysato fiilada kuleylka ah ee lagu ogaanayo kuleylka), taasoo keydineysa qarash badan oo dayactirka iyo ka shaqeynta ah;
♦ Hawlaha kormeerka badan: marka laga reebo digniinta dabka caadiga ah, cilladda wareegga furan ama wareegga gaaban;
♦ Faragelinta wanaagsan ee ka soo horjeedka EMI (Iska caabinta khalkhalka): Qaab-dhismeedka afar-geesoodka ah ee xaddidan ayaa leh awood adag oo uu iskaga caabiyo kala-goynta aagga elektromagnetic, iyo
♦ Rakibaadda iyo dayactirka fudud.
♦ Saxanka fiilada
Belt Suunka rarka
Distribution Qalabka awood qaybinta: beddel kabadhka, qalabka wax lagu beddelo, xarunta is-beddelka iyo xarunta xakamaynta mootada
Uruurinta boorka iyo nooca boorsada aruuriya
Are Bakhaarro iyo bakhaarro lagu keydiyo
System Nidaamka waxsoosaarka warshadaha
♦ Buundo, barkad iyo weel
Facilities Xarumaha keydinta kiimikada
Hang Hangarka diyaaradaha iyo bakhaarka saliida
Nidaamka isku xirka NMS2001
1. Waxaa la soo jeedinayaa in qaybta terminal-ka iyo guddiga xakameynta alaarmiga dabka ku xiran ay ahaadaan kuwo si la isku haleyn karo u saldhigan.
2. Ka mamnuuc foorarsiga ama leexinta fiilada LHD xagal ba'an, iyo radius ugu yar ee xarigga LHD waa inuusan ka yarayn 150mm ka hortagga dhaawaca.
3. Shayga waa in si fiican loo buuxiyaa inta lagu jiro rarka, laga mamnuucayo waxyeellada.
4.Waxaa la soo jeediyay in la baaro baaraha sanad walba, iska caabinta caadiga ah ee u dhexeeya ma aha in ka yar 50MΩ, haddii kale, fadlan beddel. Qalabka baaritaanka: 500V megger.
5. Lama ogola inay ilaaliso qalabka wax baadha iyada oo aan lala xidhiidhin shirkadayada.
Hore: NMS2001-Qaybta Xakamaynta
Xiga: NMS1001-CR / OD